Sonos inogadziridza vatauri vayo ichivaita kuti iwirirane ne Alexa muSpain | Gadget nhau
Karim Hmeidan | | Vatauri, Home otomatiki
Virtual vabatsiri vari mumafashoni, nzira nyowani yekudyidzana neInternet inotibvumira mikana isingaperi. Uye kana tikataura nezvevabatsiri vechokwadi, tiri kutaura nezve Alexa, mubatsiri weAmazon uyo anga ari wekupedzisira kusvika kuSpain uye anogona kunge ari mumwe weakanakisisa atinawo parizvino.
Asi nguva zhinji aya chaiwo vabatsiri anoita kuti isu tisungwe kune vatauri vekambani pachayo, mamwe maspika ayo asingawanzo kupa hukuru hwemhando yepamusoro kana ichienzaniswa nemamwe maspika akabatana atinawo pamusika. Sonos pamwe ndiye mugadziri anogadzira akanakisa masipika, ane multiroom system yatinofunga kuti yakakwana kumisha yedu. Zvakanakisa? ndeyekuti ivo vanowiriranawo neAki ... Sonos ichagadzirisa vatauri vayo nhasi ichivaita kuti iwirirane ne Alexa muSpain. Mushure mekusvetuka tinokupa iwe hwese ruzivo rwekusvika kweA Alexa kuSonos kuSpain.
Hongu, sekutaura kwedu, mushure mekuuya kweAki kuSpain musi waGumiguru 30, vagadziri vekunze vari kuisa mabhatiri kuti vativigire mumwe weakanakisa evabatsiri pamusika kumidziyo yavo. Alexa inouya kuSonos One uye Sonos Beam kuitira kuti tikumbire kuti utiridze mimhanzi yakati (kuburikidza nemasevhisi anodarika makumi mashanu ainayo), kana kutobuditsa terevhizheni nekuda kweiyo HDMI ARC protocol iyo iyo Sonos Beam (tinogona kuona izvi zvichirarama uye chokwadi ndeyekuti kana iwe uine terevhizheni ine HDMI ARC iwe unozogona kuita yako terevhizheni yakangwara kunyangwe isiri yakakomba).
Isu takakwanisa kuyedza mune demo kuti vakomana veSonos vakatiita uye chokwadi ndechekuti Uku kusvika kwe Alexa kuSonos kunoshamisira, kunyanya mushure mekuyedza iyo Amazon Echo kare. Alexa paSonos zvinoreva kuve nemhedzisiro yemubatsiri mune inoshamisa ruzha system, Hatichafanirwi kuva nemutauri wakatsaurirwa kuna Alexa, muSonos sound system tinogona kuva nesimba rese reAkiel. Uye zvakare, isu tinogona zvakare kubvunza Alexa kuti aridze mimhanzi mune chero emakamuri isu atatsanangura muSonos system.
Uye kupfuura zvese, kana isu tine anopfuura anopfuura kumwe kumhanyisa sevhisi yemumhanzi yakagadzirirwa paSonos, Alexa inogona kutaura navo vese, kunyangwe unogona kushandisa Apple Music uye Spotify pasina dambudziko. Hauzive here mimhanzi iri kuridzwa? bvunza Alexa pasina dambudziko. Izvo zvinofanirwa kutaurwa kuti kusangana kweA Alexa muSonos kubatanidzwa kwakazara, isu hatisi kutaura nezve hunyanzvi sezvazvinoitika nekumwe kubatanidzwa kwatakaona neA Alexa.
Ramba wakatarwa nekuti sekukuudza kwatinoita Panguva yanhasi (pakupera kwezuva) unogona kudhawunirodha iyo yekuvandudza yeSonos vatauri (Imwe neBeam) izvo zvinokutendera iwe shandisa Amazon mubatsiri, Alexa. Isu tinokurudzira zvikuru kuvandudza ivo kubva pakasvika Alexa kuSonos kuchawedzera zvisingaite mikana yayo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Gadget nhau » Mufananidzo uye kurira » Vatauri » Sonos inogadziridza vatauri vayo ichivaita kuti iwirirane ne Alexa muSpain
Ungachinja sei pini pane iPhone